ပိုမိုထိရောက်သောအချိန်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ပိုမိုထိရောက်သောအချိန် - အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု - ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား
ပိုမိုထိရောက်သောအချိန် - အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု - ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား APK ကို
Update ကို: Windows နဲ့ Mac ကွန်ပျူတာ clients များအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်း software ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်တစ် Linux ကို client ကိုယခုကဆက်ပြောသည်ပွီ!သင်၏အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမြှင့်တင်ရန်။ လက်ျာအလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်။ သင့်ရဲ့အာရုံနှင့်သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သင့်ဖုန်းကိုအချိန်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ထိရောက်သောအချိန်ခြေရာခံခြင်းသင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအား, သင့်အာရုံနှင့်သင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပြန်ရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုထိရောက်သောအချိန်နာရီဝန်းကျင်သင်၏အချိန်ခြေရာခံ, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပန်းတိုင်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ adapts ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်ကင်းမဲ့နေသည်။ ကိုယျ့ကိုယျကိုသိမှတ်ကြလော့လွယ်ကူပြီးအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြှနျုပျတို့အားသဘာဝမလာပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ မကောင်းတဲ့အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစိတ်ဖိစီးမှု, burnout နှင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဘဝလက်ကျန်ငွေမှဦးဆောင်!
ပိုမိုထိရောက်သောအချိန်အားလုံးသင်၏အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်တခုအလိုအလျှောက်အချိန် tracker ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကုန်ထုတ်စွမ်းအား app ကိုဖွင့်။
ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှု tool တစ်ခုပါ။
2. ဒါဟာသင်, ဖတ်ရှုခြင်းအိပ်ပျော်နေသော, တီဗီ showering သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်နေဖြစ်စေ, အားလုံးသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုအသေးစိတ်အချိန် log ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
3. သင်သည်သင်၏အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏တိကျသော analytics get; သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာပြည့်စုံသော, အလိုအလျှောက်အချိန် tracker ။
စစ်ဆေးမှုများအတွက်သင့်ရဲ့အာရုံကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ဦးကဖုန်းကိုအချိန်ထိန်းချုပ်မှု tool ကို★။
★ Big ရုပ်ပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်တကျသင်၏အချိန်အသုံးပြုမှုကိုနားလည်ရန်။
သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှာအဝေးကိုစားသောအာရုံပြံ့လှငျ့ကိုခြေရာခံတစ်ဦးကကုန်ထုတ်စွမ်းအား app ကို★။
သင့်လျော်သောအလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာအောင်မြင်ရန်တစ်ဦးက Self-တိုးတက်မှု tool ကို★။
သင်အမြဲသင်လိုအပ်ကြွင်းသောအရာရဖို့သေချာစေရန်တစ်ဦးကအိပ်ပျော်ခြင်း tracker တွင်★။
နောက်ကျောကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူထိတွေ့ရဖို့အချိန် tracker တွင်★။
ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော
သင့်ရဲ့ privacy ကိုအကြှနျုပျတို့အားအလွန်အရေးပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောသင့်ရဲ့ဒေတာကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲကျနော်တို့ရဲ့ဆာဗာများအပေါ်ထား, သင်သည် restore / ကယ်တင်အင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်ကြဘူးလျှင်, သင့်ရဲ့ device ကိုစွန့်ခွာဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အချိန်သင်ရှိသည်အရှိဆုံးပုဂ္ဂလိကအရာဖြစ်ပြီး, ထိုသို့လမ်းရပ်တည်ရန်အဘို့အကျနော်တို့ရည်ရွယ်!
- Lite ဗားရှင်း features -
- ဘက်စုံမိနစ်-Level အချိန်မှတ်တမ်း
- စေ့စေ့စပ်စပ် analytics
- Plus အားဗားရှင်း features တွေ -
Lite ဗားရှင်းအတွက်အရာအားလုံး, Plus အား:
- ROOM တွင်ထောက်လှမ်း
- ဒေတာများသိမ်းဆည်းပြီး restore
- Unlimited လက်ထောက်အသုံးပြုမှု
- Known ကိစ္စများ -
- တချို့ကအန်းဒရွိုက် 5.0 LG ကနှင့် Samsung ဖုန်းများ app ကိုအသုံးပြုမှုစာရင်းဇယားမှဝင်ရောက်ခွင့်မပေးပါဘူး
- တချို့ဖုန်းတွေမှာ (အများအားဖြင့်က Samsung, Huawei နှင့်ဂုဏ်ပြု, Xiaomi က) မကြာခဏ app ကိုသတ်ပစ်လိမ့်မည်။ သင်ကနောက်ခံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အလိုအလျောက်အချိန်ခြေရာခံခြင်းစောင့်ရှောက်ရန်ကာကွယ်ထား apps များစာရင်းတစ်ခုမှပိုမိုထိရောက်သောအချိန်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
- တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါ -
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများထံမှကြားနာအပေါ်အလွန်စိတ်အားထက်သန်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်ချက်ကိုယူဖို့အမြဲအဆင်သင့်ပါပဲ, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြချင်ဘာမှမ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကသင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလိုအလျှောက်အချိန်ခြေရာခံခြင်း, အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်အလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကို, ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်, hello@smartertime.com မှာကိုလိုင်း drop ကျေးဇူးပြုပြီး
• Lockscreen ခြေရာခံခြင်း
ပိုမိုထိရောက်သောအချိန် - အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု - ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား
6.21 ကို MB
ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်: အလုပ်အ ...
BlockSite - ပိတ်…
Flipd - နေ ...